Apple Music ngoku iyafumaneka kwi PS5 | Ndisuka kuMac
Umculo weApple ngoku uyafumaneka kwiPS5
Kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo sipapashe inqaku apho siphawule malunga ne ukukhutshwa okunokwenzeka kweapp yoMculo yeApple yePS5, ngenxa ye iifoto-skrini ezithunyelwe ngabanye abasebenzisi kwiReddit nokuba ezinye imidiya ziye zakwazi ukuphendula. Ngokungafaniyo nezinye izihlandlo, ukulinda kube mfutshane.
Isicelo Umculo weApple wePlayStation 5 ngoku ufumaneka ngokusemthethweni kwivenkile yakwaSony, enikezela ngamava adityaniswe kwikhonsoli yalo mvelisi kwaye ngaloo ndlela ejoyina iSpotify, iqonga lomculo lokusasaza elifumanekayo nakwesiphi na isixhobo kwintengiso.
I-Apple Music kwi-PS5 ivumela ababhalisile dlala iingoma ezingaphezulu kwezigidi ezingama-90kunye noluhlu lokudlala olugcinwe kunye nezikhululo zikanomathotholo ngqo kwikhonsoli yakho.
I-app ikwaxhasa Ukudlala ividiyo yomculo kwizigqibo ukuya kuthi ga kwi-4K. Ngaphaya koko, ivumela abasebenzisi ukumamela umculo abawuthandayo nangasemva okanye ngexesha lokudlala. Iividiyo zomculo zikwaxhasa ukudlala ngokuqhubekayo xa usiya okanye usuka kwiapp yeApple Music.
Abasebenzisi bePS5 banokuphehlelela usetyenziso loMculo weApple ngaphambi kokutsibela kumdlalo, okanye ngexesha lokudlala ucofa iqhosha le-PS kwisilawuli se-DualSense ukufikelela kumbindi wolawulo kwaye ukhethe ikhadi lomsebenzi womculo.
Kwakhona, ababhalisile be-Apple Music banokufumana iingcebiso ezihambelana nomdlalo idlala ngoku okanye ukhethe kuluhlu lokudlalayo kwithala leencwadi lakho okanye olunye uluhlu lokudlalwayo olukhethwe yiApple Music yemidlalo.
Abasebenzisi bePS5 banako khuphela iapp yeApple Music evenkileni kwaye ulandele imiyalelo ekwiscreen ukudibanisa iakhawunti yakho yeApple Music. Le nkqubo ibandakanya ukuskena ikhowudi ye-QR kwisixhobo se-Apple okanye ukufaka ngesandla iziqinisekiso ze-ID ye-Apple.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Umculo weApple ngoku uyafumaneka kwiPS5
I-Pixelmator Pro ngoku ihambelana ngokupheleleyo neMacOS Monterey
ISafari 15.1 ngoku iyafumaneka kwi-macOS Big Sur kunye neCatalina